British Airways ayaa ku soo laabatay Budapest iyadoo raacaysa duulimaadyada London Heathrow
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » British Airways ayaa ku soo laabatay Budapest iyadoo raacaysa duulimaadyada London Heathrow
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Soo-noqoshada British Airways waxay siisaa isku-xirnaanta rakaabka Budapest duulimaadyo badan oo dhaadheer oo dhex mara xaruntooda iyadoo suuqyo kale dib loo furayo.
British Airways ayaa dib u bilaabaysa duulimaadyadii London-Budapest
BA waxay bixisaa adeeg saddex jeer toddobaadle ah oo u dhexeeya Budapest iyo London.
British Airways si kor loogu qaado tirada duullimaadyada xilliga jiilaalka ee soo socda.
Gegida Diyaaradaha ee Budapest ayaa soo dhoweeyay dib u bilaabista adeegyadii hawada BA ee London Heathrow. Dib -u -bilaabidda isku -xidhka u dhexeeya labada magaalo -madaxda, British Airways ayaa maanta ku soo noqonaysa suuqa Budapest ee UK.
Bilowgii hore wuxuu bixiyaa adeeg saddex jeer toddobaadle ah, sida calanka UK ayaa durbadiiba xaqiijiyay kororka afar jeer toddobaad walba badhtamihii Sebtembar, oo ah horumar aad u weyn xilliga jiilaalka ee soo socda. British AirwaysSoo noqoshada ayaa sidoo kale siisa isku xirnaanta rakaabka Budapest duulimaadyo badan oo dhaadheer oo dhex mara xaruntooda iyadoo suuqyo kale dib loo furayo.
Balázs Bogáts, Madaxa Horumarinta Diyaaradaha, Madaarka Budapest wuxuu yiri: “Boqortooyada Midowday (UK) waxay ahayd suuqa ugu weyn Budapest sanado badan. Si ka sii daran, London waxay ahayd lammaaneheenna ugu weyn magaalada oo leh mug weyn, sidaa darteed waa wax aad u weyn inaan dib ugu soo dhaweyno British Airways madaarkayaga iyo weliba calaamad kale oo ah soo kabsashadeena. ”
U adeegidda in ka badan nus-milyan oo rakaab ah bishii hore-koboc xooggan oo ah 77% marka la barbar dhigo bishii Luulyo ee la soo dhaafay-Budapest ayaa markhaati u ah isbeddel wanaagsan oo soo nooleynta waddooyin badan oo muddo dheer la soo dhisay oo guuleystay.
British Airways waa diyaarad sidda calanka UK. Waxay xaruntiisu tahay London, England, meel u dhow xarunteeda ugu weyn ee Madaarka Heathrow. Diyaaradda ayaa ah tan labaad ee ugu weyn UK ​​ee fadhigeedu yahay, kuna salaysan cabbirka maraakiibta iyo rakaabka qaada, oo ka dambaysa easyJet.
London Heathrow waa garoon diyaaradeed oo weyn oo caalami ah oo ku yaal London, England. Waa mid ka mid ah lix garoon diyaaradeed oo caalami ah oo u adeega gobolka London. Dhismaha garoonka waxaa iska leh oo maamula Heathrow Airport Holdings.